Iindaba - AMANZI AMANZI NAMANZI AMANQAKU AMANZI NAMANZI AMANZI: YINTONI UKWAHLUKA?
AMANZI AMANZI NAMANZI AMANQAKU AMANZI NAMANZI: YINTONI UKWAHLUKA?
Sonke siyazibona izingqinisiso kwizixhobo ezingangeni manzi, izixhobo ezinganyangekiyo ngamanzi kunye nezixhobo zokugxotha amanzi ziphoswa kwimveliso ye-elektroniki. Umbuzo omkhulu ngulo: Uyintoni umahluko? Maninzi amanqaku abhaliweyo kwesi sihloko, kodwa sicinge ukuba sizakuphosa iisenti zethu kwaye sijonge ngakumbi umahluko phakathi kwawo omathathu la magama, kugxilwe ngokukodwa kwilizwe lezixhobo.
Okokuqala, masiqale ngesichazi-magama esikhawulezayo sokungangeni manzi, ukumelana namanzi kunye nokugxotha amanzi, njengoko kunikwe yiOxford English Dictionary:
Ukumelana namanzi: kuyakwazi ukumelana nokungena kwamanzi ukuya kwinqanaba elithile kodwa hayi ngokupheleleyo
Amanzi agxothayo: awangeneki ngokulula ngamanzi, ngakumbi njengesiphumo sokuphathwa kwinjongo enjalo ngengubo yomphezulu
Ukungena manzi: ukunganyanzeleki emanzini
Ithetha ntoni into yokuba amanzi aMelana noManzi?
Iyawakhaba amanzi lelona nqanaba lisezantsi lokukhuselwa kwamanzi kwezi zintathu. Ukuba isixhobo sibhalwe ukunganyangeki kwamanzi oko kuthetha ukuba isixhobo ngokwaso sinokwakhiwa ngendlela yokuba kubenzima ngakumbi ukuba amanzi angene ngaphakathi kuso, okanye kusenokwenzeka ukuba sigutyungelwe yinto elula kakhulu enceda ukuphucula amathuba esixhobo sokusinda ekuhlanganeni emanzini. Ukumelana namanzi yinto oyibona iqhelekile phakathi kweewotshi, kuyinika amandla okumelana nokuhlamba izandla okuphakathi okanye ishawa emanzi.
Kuthetha Ntoni Ukugxotha Amanzi?
Amanzi angangeni manzi ukutyabeka ngokwenyani linyathelo nje elinyukayo ukusuka kulwelo olungena manzi. Ukuba isixhobo siphawulwe njengamanzi angangeni manzi sinazo iipropathi apho uye waqikelela, wagxotha amanzi kuzo, uzenza hydrophobic. Isixhobo esigxotha amanzi sime kwithuba eliphezulu kakhulu lokuba sibotshwe ngolunye uhlobo lwefilimu encinci ye-nanotechnology, nokuba ingaphakathi, ngaphandle, okanye zombini, kwaye inethuba elingcono lokuma emanzini kunesixhobo sakho esiqhelekileyo. Iinkampani ezininzi zibanga ukuba amanzi ayaphindaphinda, kodwa eli xesha lixoxwa kakhulu kuba into egcina amanzi eqinile inqabile kwaye ngenxa yayo yonke imibuzo kunye nezinto ezingalindelekanga ezinxulunyaniswa nayo.
Athetha ntoni amanzi?
Ukungena manzi Inkcazo ilungile ngokuthe ngqo, kodwa umxholo ongasemva kwayo awunjalo. Okwangoku, akukho mgangatho usekwe kumzi-mveliso ukuze isixhobo sihlele njengamanzi. Eyona nto ikufutshane ikhoyo ngoku, ngokokulinganisa kwinqanaba lokulinganisa, yile Inqanaba loKhuselo lwe-Ingress isikali (okanye iKhowudi ye-IP). Eli nqanaba labela izinto ukukalwa ukusuka ku-0-8 ngokwendlela esisebenza ngayo isixhobo ugcina amanzi ukuba angangeni kuyo, aka ukungena kwamanzi. Ngokucacileyo, kukho isiphoso esinye kule nkqubo yokulinganisa: Kuthekani ngeenkampani, njengathi apha eHZO ezingakhathazeki ngokugcina amanzi ngaphandle kwesixhobo ukuze siwonge kumonakalo wamanzi? Iingubo zethu zivumela amanzi ngaphakathi kwizixhobo, kodwa izinto ezingangeni manzi sizinxiba ezi zixhobo zibakhusela nakuphi na ukonakala kwamanzi. Ezi nkampani zibonelela ngenkonzo engahambelaniyo noko kuthelekiswa nemilinganiselo ye-IP, kodwa isalawula ukubonelela ngesisombululo kwabo baxhasi bafuna ukuzikhusela kwimozulu nakukufa “kwendlu yangasese” eyoyikekayo.
Sebenzisa igama elingenamanzi kunokuthathwa njengokuhamba okuyingozi kwiinkampani ezininzi. Kungenxa yokuba igama elingena manzi lihlala lithetha uluvo lokuba le yimeko esisigxina, kwaye nantoni na eye 'yangenwa ngamanzi' ayinakuze isilele ngenxa yokudibana namanzi-nokuba imeko ithini na.